Paompy fanosotra ZB-H, DB-N | Paompy fanosorana menaka
Home/Paompy elektrika famenosana herinaratra/Paompy fanosorana ZB-H, Series DB-N - Soso-kevitra, Paompy fanosorana menaka
Paompy fanosorana ZB-H, Series DB-N - Soso-kevitra, Paompy fanosorana menaka
Product:ZB-H (DB-N) Paompy fanosorana menaka - Paompy fanosorana mivoatra
1. Boky efatra fanosotra amin'ny 0 ~ 90ml / min.
2. Môtô mavesatra manana fitaovana, serivisy lava kokoa ary tsy dia lafo ny fikojakojana
3. Fampiasana fanosotra haingana sy azo antoka. Miaraka na tsy misy sarety tsy voatery.
Kaody mitovy amin'ny ZB-H & ZB-N:
Oil lubrication paompy ZB-H (DB-N) dia fitaovana amin'ny ankapobeny rafitra lubrication foibe ho an'ny milina fitaovana. Ny paompy fanosorana menaka ZB-H (DB-N) dia azo alaina ho an'ny rafitra fanosorana afovoany miaraka amin'ny fatran'ny lubricating ambany, manome ny teboka fanosotra 50 etsy ambany, ary max. Ny tsindry miasa dia 315bar.
Ny paompy fanosorana menaka dia afaka mamindra ny menaka na menaka mivantana amin'ny teboka fanosotra tsirairay na amin'ny alàlan'ny andiany SSV valva mandroso. Ny paompy fanosotra dia matetika fitaovana amin'ny milina ho an'ny Metallurgy, Harena an-kibon'ny tany, Seranana, Fitaterana, Fanorenana & Fitaovana hafa.
Kaody famandrihana ny paompy fanosorana menaka ZB-H
(1) Karazana paompy fanosorana menaka = série ZB
(2) H = Max. Fanerena 31.5Mpa/315Bar/4567.50Psi
(3)Vola famahanana menaka = 0 ~ 25ml / min., 0 ~ 45ml / min., 0 ~ 50ml / min., 0 ~ 90ml / min.
(4) Fanazavana fanampiny
Takelaka data ZB-H Teknika
Paompy fanosotra menaka ZB-H (DB-N) Series
Max. Fanerena miasa: 315bar / 4567.50psi (vy)
Angona ara-teknika momba ny paompy fanosotra menaka ZB-H (DB-N) Series :
modely Max. tsindry Tank Volume Tselatra moto Motor Power Volan'ny famahanana Weight
1. Ny paompy fanosotra menaka ZB-H (DB-N) dia azo ampiasaina amin'ny toerana fiasana amin'ny hafanana ara-dalàna, ny vovoka kely ary ny famenoana mora foana.
2. Ny menaka dia tsy maintsy ampiana amin'ny alàlan'ny famenoana fidirana sy fanerena amin'ny paompy fanosotra elektrika, tsy azo atao ny manampy fitaovana tsy misy fanodinana sivana.
3. Ny tariby elektrika dia tsy maintsy ampifandraisina amin'ny maotera paompy fanosorana menaka araka ny fihodinan'ny maotera, ny fihodinana rehetra dia voasakana.
4. Misy injectors lubricating bebe kokoa, ny injector fanampiny tsy ampiasaina dia ho azo fehezina amin'ny plug M20x1.5.
Solika fanosotra paompy ZB-H (DB-N) Operation Symbol:
Solika fanosotra paompy ZB-H (DB-N) Fametrahana refy
[email voaaro]2021-11-17T21: 56: 40 + 00: 00